» “साइली” गितका गायक हेमन्त रानाले अमेरिकामा कसे लगन गाठो ! को हुनत हेमन्तको बेहुलि ? हेर्नुहोस “साइली” गितका गायक हेमन्त रानाले अमेरिकामा कसे लगन गाठो ! को हुनत हेमन्तको बेहुलि ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
गायक हेमन्त राना मंगलबार आफ्नाे प्रेमिकासँग बिबाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा रहेकी प्रेमिका माया अधिकारीसँग उनले लगनगाँठो कसेका हुन् फिल्म निर्माता एवं संगीतकार समेत रहेका राना लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । उनले पछिल्लो समय ‘साइँली’ फिल्म निर्माण पनि गरेका थिए ।नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा एक पटक सबैले सुनेको गीत हो ‘सुन साइँली।’ गीतमा प्रयोग भएको ‘चालिस कटेसी रमाउला’ ले विभिन्‍न ट्रोल नै बने। नेपालीहरु युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको वेदनालाई टपक्क टिपेर गीतमार्फत प्रस्ट्याएपछि केही समय कम चर्चामा रहेका गायक हेमन्त रानालाई चर्चाको शीखरमा पुर्‍यायो। हेमन्तसँगै उस्तै चर्चामा आए गीतको म्‍यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेका कलाकारद्वय गौरव पहारी र मेनुका प्रधान।
आम नेपालीको पीडालाई म्‍यूजिक भिडियमा न्‍यायपूर्वक अभिनय गरेर सफलता पाएपछि उक्त टोलीले ‘साइँली’ नामको चलचित्र नै बनाउने घोषणा गरेका थिए । काठमाण्डौं । यो देश बिगार्ने ५’७ हजार भ्रष्टहरुलाई जेल नहालीकन म प्रधानमन्त्री पद छोड्दिन भनोस् भन्ने चाहाना हरेक नेपालीले यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राखेरका छन् । ओलीले नेतृत्वको गरेको पार्टी वा सरकार त्यसपछि भने बहुमत मात्रैहोईन दुई तिहाईको साथ राज्य चलाउने छ ।
यो पनि …नकेपाका अर्का अध्यक्षप्रचण्डले भारतको लागि कम्फटेवल सरकार भनेको केहि समयमा नै केहि बुद्धीजिवीहरुले यस्तो बिश्लेषण गरेका हुन । नेपालमा भष्टचारीको यति धेरै बिगबिगी छ कि पैसा नदेखाई काम नै नहुनेसम्म छ ।
यो अबस्थामा केपी ओलीले यो देश बिगार्ने ५/७ हजार भ्रष्टहरुलाई जेल नहालीकन म प्रधानमन्त्री पद छोड्दिन भन्ने हो भने र आफ्नैबाट शुरुवात गर्ने हो भने उनी प्रति आम नागरीकको चासो झनै बढेर जानेछ ।
संसद बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यताको बिच प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले यो काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन त्यो भने हेर्न बाकी छ ।
भष्टचारीको अनुहार समेत हेर्दिन भनेका ओलीले यति काम गरेको अबस्थामा उनलाई र उनको पार्टीलाई नागरीकमा जान सहज अबस्था आउने छ । अन्यथा आफैले मृत्युशैयामा पुर्याएको संसदले ओलीलाई नै फेरी प्रधानमनत्री बनाउला र सरकार चलाई राखुला भन्ने सपना नदेखेको राम्रो हुने छ । ओलीले ंससदमा अबिश्वासको मत फेस गर्दा उनी नै कमजोर देखिएका छन् ।